Ividiyo: Imicimbi yeendaba | Martech Zone
Ividiyo: Imicimbi yeendaba
NgeCawa, ngoFebruwari 24, 2013 Douglas Karr
Phezolo bendiye kwi UMnyhadala weFilimu waseFranklin, umnyhadala wonyaka wokubhiyozela iividiyo ezibhaliweyo, ezifotyiweyo zaze zaveliswa ngabafundi besikolo samabanga aphakamileyo iFranklin Indiana. Iividiyo ezimfutshane zazikhuthaza kwaye ophumeleleyo wabizwa enye Imicimbi yeendaba nguAustin Schmidt noSam Meyer.
Ifilimu igxile kumjikelo weendaba kwaye ithelekisa umabonwakude wasekhaya, iphephandaba kunye noonomathotholo kunye nendlela ekufuneka behlengahlengise ngayo imfuno yangoko yomxholo ngewebhu nakumajelo asekuhlaleni. Ngelixa kukho imfuno engxamisekileyo yomxholo kunye nabaphulaphuli ekwabelwana ngayo kumajelo aphakathi, eli bali, ngokungaqhelekanga, ngumzekelo obalulekileyo wento ebalulekileyo kunye nesitshixo kubuntatheli obulungileyo. Iibhloko kunye nemidiya yoluntu zizinto eziphambili zonxibelelwano kunye nokupapasha khawuleza, kodwa umxholo awuphandwanga ngokupheleleyo kwaye ubhalwe njengebali elibhalwe yintatheli elungileyo.
Ulwazi olukhulu luhlala lusetyenziswa kakuhle. Iintatheli akufuneki zikhuphisane nomjikelo weendaba we-24/7, kufanele ukuba zibonelele ngobunzulu obufunekayo ukuze siqonde ngokupheleleyo isihloko esinikiweyo. Ndicinga ukuba yeyona nto ilahlekileyo kumlo wee-eyeballs kwaye yiyo kanye le nto ukufundwa kunye nokubukela kubhadula kwimithombo yeendaba zemveli. Ayikuko ukuba iindaba zibhetele kwi-intanethi, kukuba iindaba azixelwa kakuhle. Ndiyathemba ukuba uAustin noSam bakufundile oku njengoko babebhala kwaye bephuhlisa ibali labo elihle.
Kwaye ndiyathemba ukuba yile nto abathengisi abafunda ngayo ukondla irhamncwa njengokuba. Ukubhala umxholo ngenxa yokubhala umxholo kuphazamisa ugxininiso lwabaphulaphuli bakho kwaye akuboneleli ngolwazi olugqityiweyo abalifunayo. Bhala kakuhle, wabelane rhoqo, kwaye wenze umxholo omangalisayo.
tags: uustin schmidtungawettrickUmnyhadala wefranklin wefilimuImicimbi yeendabasam meyer
Imidiya yokuncokola ichazwe ngeKofu